PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - EZOTHANDO:
UKUBA nomntwana kuba nezinguquko ezihambisana nezinselelo eziningi ebudlelwaneni bezothando. Ezinye zezinselelo eziba khona zingagcina zidale uqhekeko phakathi kwezithandani, ikakhulukazi uma ukhakhayi lungakaqini kulabo abathandanayo.
Lezi zinguquko eziza ngemuva kokuthola umntwana azithinti nje kuphela labo bazali bomntwana, kodwa zithinta ngisho umndeni wonke, ngisho nabangani imbala.
Kusemqoka-ke ukufunda izindlela zokubhekana nezinguquko eziza nokuba nomntwana. Ezinye zezinguquko esikhuluma ngazo lapha zisobala - njengokuthi nje uma kade nibabili endlini, ngemuva kokuthola umntwana kusho ukuthi senibathathu, kuqhubeke kanjalo kanjalo.
Ongoti-ke benhlangano INCT bathi nakuba kunezinselelo ukukhulisa umntwana, ikakhulukazi ngonyaka wokuqala, kwezinye izithandani noma abazali lokho kungaqinisa ubudlelwano, bahloniphane njengabazali, futhi babelane ngesipiliyoni abasitholayo njengabazali abasha esingaholela ekubeni buqine kakhulu ubudlelwane.
Bathi futhi ongoti kusemqoka ukubhekana nazo zisenzeka izinkinga ebudlelwaneni ezivela ngemuva kokuthola umntwana, ningaziyeki nje zilenga kuze konakale.
Kubikwa ukuthi imbangela enkulu yesimo esishubile ebudlelwaneni ngemuva kokuthola umntwana wukukhathala.
Kuyaziwa ukuthi isikhathi esiningi ingane uma isencane iyalala isikhathi esiningi, uthole ukuthi ebusuku sekufanele kulalwe ingabe isalala, iphaphame idlale, noma ifune ukuncela kunina, noma ukushintshwa inabukeni, ngesinye isikhathi ivele iqandule ikhale phakathi kwamabili.
Ngaleso sikhathi uthola ukuthi abazali bakhathele, badinga ukuphumula ngoba mhlawumbe kade besebenza kanzima usuku lonke - ngesikhathi ingane ibanga lowo msindo, omunye kungenzeka abe nenhliziyo encane, acikeke. Ikakhulukazi obaba bajwayele ukubhoka ngolaka, batshele unina wengane ukuba ayithulise.
Indlela okubikwa ukuthi kungabhekwana ngayo nalesi simo sokuphazamiseka ebuthongweni, engagwema ingxabano, wukuba omunye wabazali bomntwana uma edinga isikhathi sokuphumula, angal-ala kwelinye igumbi. INDLELA YOKUPHILA
Enye into engenza isimo sishube ebudlelwaneni wukuthi ukufika komntwana kushintsha indlela ebeniphila ngayo - njengokuthi nje uma kade ningabantu abathanda ubumnandi socialising),
ISITHOMBE NGABE: THE TIME
UKUZALWA kosana kungadala izinselelo eziningi ebudlelwaneni. Ezinye zazo (izinselelo) zingaholela ekubhidlikeni kobudlelwano uma izithandani zehluleka wukubhekana nazo.
ISITHOMBE NGABE: MIND MOVES
KUSEMQOKA ukufunda izindlela zokubhekana nezinguquko eziza nokuba nomntwana.